Maxaa kasoo baxay kulankii Midowga Musharaxiinta iyo Beesha Caalamka? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa kasoo baxay kulankii Midowga Musharaxiinta iyo Beesha Caalamka?
Maxaa kasoo baxay kulankii Midowga Musharaxiinta iyo Beesha Caalamka?
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, ahna guddoomiyaha golaha midowga musharaxiinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa caawa kulan gaar ah la qaatay xubnaha beesha caalamka.
Kulankaas ayaa ku qabsoomay qadka Internet-ka, waxaana diiradda lagu saaray khilaafka ka taagan doorashooyinka dalka, kaas oo haatan beesha caalamku ay xal u raadineyso.
Sheekh Shariif oo kulankaas ku metelayey golaha uu hoggaamiyo ee midowga musharaxiinta ayaa xubnaha beesha caalamka kala hadlay marxaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka dalka, isagoo u gudbiyey mowqifkooda ku aadan khalaafka jira iyo qabsoomidda doorashada.
Kulankaan waxuu ku soo aaday iyadoo maanta xubno ka socday beesha caalamka ay qadka internet-ka kula xariireen Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyagoo kala hadlay khilaafka doorashada.
Xubnihii maanta la shiray Axmed Madoobe ayaa carrabka ku adkeeyeen muhiimada wada-hadalku u leeyahay xasiloonida dalka iyo wax wada qabsiga dhinacyada siyaasadda Soomaaliya.
Maamullada Jubbaland iyo Puntland iyo inta badan musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hor yimid qaabka ay dowladda dhexe u hir-gelineyso doorashada, waxayna aad u diidanyihiin guddiyada loo magacaabay doorashada oo ay sheegeen inay ku jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka iyo hey’adda NISA.
Beesha Caalamka ayaa haatan ku dadaaleysa in mar kale la isukeeno dhinacyada iska leh go’aanka doorashada ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, si looga heshiiyo khilaafka jira, isla markaana durba la guda galo hir-gelinta doorashooyinka, maadaama maalmo koobay ay ka hareen mudo xileedka madaxweynaha.